Twelve Coin စျေး - အွန်လိုင်း TWLV ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Twelve Coin (TWLV)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Twelve Coin (TWLV) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Twelve Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Twelve Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Twelve Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Twelve CoinTWLV သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1.77Twelve CoinTWLV သို့ ယူရိုEUR€1.51Twelve CoinTWLV သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£1.36Twelve CoinTWLV သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1.63Twelve CoinTWLV သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr15.98Twelve CoinTWLV သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.11.25Twelve CoinTWLV သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč39.57Twelve CoinTWLV သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł6.66Twelve CoinTWLV သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$2.36Twelve CoinTWLV သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$2.49Twelve CoinTWLV သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$39.75Twelve CoinTWLV သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$13.73Twelve CoinTWLV သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$9.53Twelve CoinTWLV သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹132.52Twelve CoinTWLV သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.300.01Twelve CoinTWLV သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$2.43Twelve CoinTWLV သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$2.71Twelve CoinTWLV သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿55.11Twelve CoinTWLV သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥12.31Twelve CoinTWLV သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥189.17Twelve CoinTWLV သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩2100.5Twelve CoinTWLV သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦687.74Twelve CoinTWLV သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽129.62Twelve CoinTWLV သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴49.1
Twelve CoinTWLV သို့ BitcoinBTC0.000156 Twelve CoinTWLV သို့ EthereumETH0.00473 Twelve CoinTWLV သို့ LitecoinLTC0.0331 Twelve CoinTWLV သို့ DigitalCashDASH0.0205 Twelve CoinTWLV သို့ MoneroXMR0.0206 Twelve CoinTWLV သို့ NxtNXT144.73 Twelve CoinTWLV သို့ Ethereum ClassicETC0.266 Twelve CoinTWLV သို့ DogecoinDOGE536.16 Twelve CoinTWLV သို့ ZCashZEC0.0221 Twelve CoinTWLV သို့ BitsharesBTS69.78 Twelve CoinTWLV သို့ DigiByteDGB58.8 Twelve CoinTWLV သို့ RippleXRP6.38 Twelve CoinTWLV သို့ BitcoinDarkBTCD0.0622 Twelve CoinTWLV သို့ PeerCoinPPC5.95 Twelve CoinTWLV သို့ CraigsCoinCRAIG822.66 Twelve CoinTWLV သို့ BitstakeXBS77.01 Twelve CoinTWLV သို့ PayCoinXPY31.51 Twelve CoinTWLV သို့ ProsperCoinPRC226.52 Twelve CoinTWLV သို့ YbCoinYBC0.00097 Twelve CoinTWLV သို့ DarkKushDANK578.95 Twelve CoinTWLV သို့ GiveCoinGIVE3907.94 Twelve CoinTWLV သို့ KoboCoinKOBO411.32 Twelve CoinTWLV သို့ DarkTokenDT1.63 Twelve CoinTWLV သို့ CETUS CoinCETI5210.15
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 07:15:03 +0000.